Galaxy Attack အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（88.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Galaxy Attack - Space Shooter 2021
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးနဂါးငွေ့တန်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်း !!!
Galaxy Attack သည်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောအထက်မှအောက်ရှုထောင့်အာကာသစစ်ပွဲကိုကစားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အာကာသသေနတ်နှင့်ရှင်သန်မှုဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၊ ဘုန်းအသရေနှင့်တာ ၀ န်အရဆိုလျှင်နဂါးငွေ့တန်းအားတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်သင်သေနတ်သမားအနေဖြင့်ကစားသင့်သည်။ လိုအပ်သောစွမ်းရည်များသည်မြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုများနှင့်ရန်သူကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းပုံစံများကိုအလွတ်ကျက်ခြင်းထက်ပိုပါသည်။
ဤအာကာသသေနတ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စွဲလမ်းစေသည့်မော်ကွန်းနဂါးစစ်ပွဲဂိမ်း ၂၀၀၊ မစ်စ် ၂၀၀ ကျော်၊ ၁၀၀ ကျော်နှင့်အာကာသယာဉ်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများဖြစ်သည်။ သင်၏အာကာသယာဉ်အင်ဂျင်များနှင့်ဤအန္တိမဂလက်ဆီစစ်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ပါ။
သင်၏အာကာသယာဉ်အားရန်သူလေယာဉ်မှူးများနှင့်မိုးမျှော်တိုက်များစောင့်ဆိုင်းနေသောနဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီရှိဂလက်ဆီဆိပ်ကမ်းမြို့များမှတဆင့်ပျံသန်းပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ နဂါးငွေ့တန်းကျူးကျော်သူများကိုအနိုင်ယူရန်သင်၏ကောင်းကင်အင်အားနှင့်ပြန်လည်တင်ထားသောလက်နက်များအသုံးပြုပါ။ ဒီနဂါးငွေ့တန်းတိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင်ရှင်သန်ပါ!
ဒီအာကာသသေနတ်သမားသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်စွဲလမ်းစေနိုင်သောမော်ကွန်းနဂါးငွေ့တန်းစစ်ပွဲ 200 မစ်ရှင်, ကျူးကျော်သူ 100 နှင့်အာကာသယာဉ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများစွာနှင့်အတူ။
သင်၏အာကာသယာဉ်အင်ဂျင်များကို စတင်၍ ဤအန္တိမနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ galactic စစ်ပွဲ။
★တွန်းလှန်မစ်ရှင်များနှင့်အတူလှပသောအဆင့်များ။ ။ ★အစွန်းရောက်သူရဲကောင်းတိုက်ပွဲများ။
★သင်၏ဒိုင်းများ၊ သေနတ်များ၊ ဒုံးကျည်များ၊ လေဆာများ၊ အကြီးစားဗုံးများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ နှင့်သံလိုက်များ။
★အစပြုသူများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်သာမကအမာခံသေနတ်သမားများပါ ၀ င်သည်။
★အလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်း (၇) ခု၊ arcade shoot-em-up gameplay ကဲ့သို့★အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုစောင့်ဆိုင်း
★သင်၏ဒိုင်းများ၊ သေနတ်များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်း ssiles, လေဆာနှင့်သံလိုက်
★သာမန်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အတောင့်တင်းဆုံးသေနတ်သမားစွဲစွဲသူများ - ★မယုံနိုင်လောက်အောင်အီလက်ထရောနစ်တေးသံ
SHOOT-EM ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်နှင့်အဝေးကွင်း - အာကာသသေနတ်သမား၊ သင့်ရဲ့အာကာသတိုက်လေယာဉ်ကိုအမြောက်များနှင့်ဒုံးကျည်များတပ်ဆင်ထားသောစစ်မြေပြင်သို့ယူဆောင်ပါ။ သင်၏ရန်သူအားအပြစ်ပေးရန်အတွက်လုံလောက်သောခဲယမ်းများကိုယူခြင်း။ ဒီပေါက်ကွဲနေသောဂလက်ဇီယားပစ်ခတ်မှုဂိမ်းတွင်ရန်သူသေနယ်မြေများကိုဖြတ်သန်း။ သင်၏စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပါ။
အာကာသစခန်းသည်ယခုပင်စတင်နေပြီ၊ သင်၏စစ်နည်းဗျူဟာကိုကောင်းစွာစီမံ။ သင်၏တိုက်လေယာဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုကာကွယ်ရန်။
Game ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ခံစားပါ !!!
ဘာအသစ်လဲ Galaxy Attack - Space Shooter 2021 1.7.11
Galaxy Attack - Alien Shooter | Android
Galaxy Attack 2021: Alien Space Shooter Games Android/ IOS Gameplay
Space shooter Galaxy attack Galaxy shooter | level 22.1 | 2021 Gameplay
Space Shooter: Galaxy Attack - Android Gameplay
Space shooter Galaxy attack Galaxy shooter | Light storm vs All bosses part 1 | 2021 Gameplay.
Galaxy Attack - Space Shooter 2021 1.7.1
Galaxy Attack - Space Shooter 2021 1.6.91
Galaxy Attack - Space Shooter 2021 1.6.9